09 December 2008.
Dagaallo lagu jabiyay ciidammada gumaysiga
Waxayeellooyin guaysigu u gaystay dadwaynaha
Diyaaradaha gumaysiga oo duqeeyay deegaanno Ogaadeenya ka mid ah
G/kuxigeenka 1aad ee jwxo oo magaalada Northampton ee U.K kula ciiday jaaliyada Ogadenya ee magaaladaasi.
Oday dhaqameedyada gobolada Jubooyinka oo Al -Shabaab ku eedeeyey inay kusoo duuleen deegaankooda iyo dadkooda.
Jwxo oo beenisay bayaana kasoo saartay inaysan ciidan onlf ah ka joogin jubooyinka.
Dagaallo dhawrkii maalmood ee u denbeeyay dhex-maray CWXO iyo kuwa gumaysoga Itoobiya, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay ugu yaraan 13 askari, waxaa sidoo kale lagaga dhaawacay 15 askari, sidaas waxaa noo soo heegay wariyaha nooga soo warama dalka Ogaadeenya. Dagaalladaasi waxay u dheceen sidatan;
04/12/08 Kood-Dhurwaa, oo Gudhis ka tirsan, waxaa weerar gaadmo ah loogu gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay, waxaana la gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahitniisa la haynin.
01/12/08 dagaal ka dhacay Lama-daga, oo degmada Dannood ka tirsan, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 3 askari, 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
30/11/08 cutub ka tirsan CWXO ayaa weerar mir ah ku qaaday ciidammada gumaysiga ee fadhigoodu yahay magaalada Shaygoosh, waxayna weerarkaas kaga dileen 3 askari, 2 kalana way ka dhaawaceen.
Isla 30/11/08 Laan-dheer dagaal ka dhacay waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 2 askari, 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
28/11/08 Dhabiley, oo Galaalshe ka tirsan, dagaal ka dhacay waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 4 askari, 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 28/11/08 Ban-yare waxaa weerar mir ah loogu gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay oo halkaas hawlgal u tegay, waxaana la gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
23/11/08 waxaa weerar mir ah lagu qaaday ciidammada gumaysiga ee fadhigoodu yahay magaalada Fiiq, waxaana la gaadhsiyay khasaare aan wali faahfaahintiisa la helin.
10/11/08 Maroodiga, oo Sallaxaad ka tirsan, weerar gaadmo ah oo loogu gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay, waxaa lagaga dilay 1 askari, 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
Ciidammada gumaysiga ayaa waxyeellooyin kala duwan u gaystay dadwayne rayad ah oo ku kala sugan meelo kala duwan oo Ogaadeenya ka mid ah. Waxayyeellooyinkani waxay u dhaceen sidatan;
30/11/08 Laan-dheer waxay ciidammada nacabka ah ee gumaysiga Itoobiya ku dileen nin culimo ah oo lagu agacaabo Sh Cabdi Guud-cadde.
29/11/08 meesha lagu magacaabo Neef ku-celiye, oo Wardheer ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu ku dileen nin shacab ah oo lagu magacaabo Cabdi-Khadar Guhaad Cadhays.
10/11/08 Maroodiga, oo Sallaxaad ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu ku dileen labo nin oo shacab ah oo lagu kala magacaaboMacalin Axmed Ibraahim iyo In C/llaahi Caruus oo magaciisa hore aanaan haynin.
02/12/08 Babaase, oo Qorile u dhaw, waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Xiis Muuse Cabdi
2- Cumar Cabdi Axmed
3- Maxamed Cali Muuse
4- Faysal Muxumed Cabdille
5- Khadar Xuseen Ismaaciil
6- Axmed Xuseen Ismaaciil oo ay isaga 5 Qori ka dhaceen.
30/11/08 magaalada Yucub waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dad shacab ah oo aan magacayadooda ka hayno;
1- Cali Jaamac Axmed
2- Cali AxmedGaab
3- Axmed Cabdille
4- Cumar Bashiir Jaamac
5- Dayr Dhuub
6- Yuusuf Fiixiye
7- Cali Siigaale oo ay 10 Adhi ahna ka dhaceen.
29/11/08 Nus-dariiqa waxay ciidammada gumaysigu ku xidheen nin waayeel ah oo lagu magacaabo Xaaji Cabdi Samatar.
Isla 29/11/08 Birqod waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Axmed Nuur Cali Siyaad iyo
2- Saafi Axmed Deeq.
27/11/08 Shilaabo waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen ugu yaraan 50 qof oo shacab ah, waxaanan magacyadooda helnay;
1- Makhtal Adeec
2- Faysal Xasan xarbi
3- Xasan Cabdille
4- Sh Xasan Nadiif iyo
5- Faysal Cagalaab.
23/11/08 Fiiq waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dad aad u badan oo shacab ah, hase yeeshee waxaan magacyadooda helnay;
1- Sureer Axmed Daahir iyo
2- Nimco Ibraahim
01/12/08 Aftinta, oo Awaare ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu Aqallo iyo hanti akle kaga gubeen dadka kala ah;
1- Nuur Abshir, oo ay hal Aqal iyo 4 Kiintaal oo Raashiin ah ka gubeen
2- Maxamed Good, oo ay isagana hal Aqal iyo 4 Kiintaal oo Raashiin ah ka gubeen.
01/12/08 magaalada Yucub waxay ciidammada gumaysigu ku qasheen hal Awr oo roroy ah, kaasoo dadka isla lahaa aanaan wali magacyadooda helin.
17/11/08 Sallaxaad waxay ciidammada gumaysigu xoolo kala duwan kaga dhaceen dadka kala ah;
1- Suldaan Mahad oo ay 90 Adhi ah iyo 3 Geel ah ka dhaceen
2- C/raxmaan Sh C/llaahi oo ay 25 Adhi ah ka dhaceen
3- Sh C/llaahi Jiriqsade oo ay 1 Sac ka dhaceen
4- Xasan Xabiib Maxamed oo ay isagana 3 Geel ah ka dhaceen.
28/11/08 meesha lagu magacaabo Dhabiile waxay ciidammada gumaysigu 20.000 oo Bir kaga dhaceen Cabdi Mahad Maxamed Xuseen oo ay la tageen, ilaa iyo haddana aan laga warhaynin meel ay geeyeen.
Waxaa kaloo jira dad badan oo lagu xidhxidhay magaalooyinka Jigjiga, Dhagaxbuur, Qabridaharre iyo Wardheer, kuwaasoo la sheegayo in qaarkood lagu xukumay 2-3 sano oo xadhiga. Wali nooma ayna suuragalin inaan dadkan magacyadooa helno.
Dhinaca kale toddobaadkii u denbeeyay waxaa magaalada Jigjiga shirk u lahaa maamulka waxa Kililka loogu yeedho, waxaana shirkaas lagaga hadlayay sidii loo xojin lahaa cadaadiska dadwaynaha lagu hayo.
Ciidammada gumaysiga ayaa markii ay ku guul darraysteen inay cudud ku muquuniyaan CWXO waxay hadda billaabeen inay adeegsadaan Diyaaradaha qumaatiga u kaca, kuwaasoo toddobaadkii u denbeeyay ay ku weerareen deegaanno kal duwan o Ogaadeenya ka mid ah.
Diyaaradahan ayaa intii u dhaxaysay 4 - 6/12/08 waxay duqayn u gaysteen deegaanno Farmadow ka tirsan, iyagoo waxyeellooyin kala duwan gaadhsiiyay dadka rayadka ah ee deegaannadaas ku dhaqan.
Diyaaradahani ayaa sidoo kale ciidammo ku daadiyay deegaanka Farmadow, arrintaasoo horseeday cabsi iyo argagax la soo dersa dadka rayadka ah iyo xoola dhaqatada deegaannadaas ku dhaqan.
Diyaaradahan, oo 6 ka kooban, waxay ka kacayaan magaalada Qabridaharre, waxaana lagu soo warramayaa in toddobaadkii hore halkaas la keenay.